Oku kuthethwa ngolu hlobo kwinqanaba lomzimba, kodwa kunjalo: iingxaki zokugaya zininzi kakhulu entwasahlobo nasekwindla. Izizathu zesifo sesisu nesisu zisanele:
1. Ukutshintsha ukutya.
Ebusika, njengomthetho, udla ikakhulukazi iphariji, iimveliso zobisi, inyama. Ukutya okunjalo kuthathwa njenge-alkali - kunciphisa ukuveliswa kwejusi yesisu. Ngokufika kwentwasahlobo, awufuni kwakhona oku, kuba sele usele ukhathele ukutya okunjalo. Ufuna into entsha evela kumyezo. Iimveliso ezinjalo zikhuthaza ijusi yesisu, esicasula i-mucosa yesisu. Emva kwakho konke, umzimba wakho sele usuphelile umkhwa unokutya okunjalo.
Ukuxinzezela amandla okomzimba wesisu kunye namathumbu ukuba abuyele.
3. Ixesha le-bhubhane.
Kwixesha elide lomkhuhlane wesifo somkhuhlane kunye nokubandayo, sithatha iintlobo ezahlukeneyo zemithi. I-Aspirin kunye nokulungelelaniswa kwayo isonakalisa i-membrane ye-mucous kwaye ivelise isixa esikhulu sejusi esiswini. I-Paracetamol inefuthe elibi kwisibindi kwaye iphazamise umsebenzi wayo.
Iingcali zengqondo ziye zaphawula ukuba abo bantu banesifo sengqondo, baninzi badla ngenxa yesisu neesisu.
Kwaye ngoku siya kuqwalasela izifo zesisu nesisu.
I-Gastritis yinkathazo yesisu. Xa une-asidi ephezulu, ubuhlungu buhlungu kwisisu esisentla, "ngaphantsi kwepuni". Kwimeko elambileyo, kwaye oku kuza ngeyure okanye ezimbini emva kokutya, uyakhathazeka, emva kokutya kwesinye isidlo. Ngokuchaseneyo, awuyi kuba nesidlo. Kodwa kuya kubakho ukunyanzelisa, ukugubha kunye nazo zonke iintlobo zokuphazamiseka. I-Gastritis ingakhokelela kwisifo se-pancreas, i-gall bladder, amathumbu.
Isilonda sisinkingeni esiswini. Kubonakala ke uvakalelo olubuhlungu, ngoko kuphela ukutshaya. Ngamanye amaxesha uyagula kwaye umncinci kwindawo yomgudu. Ngaphandle kogqirha, awuyiqondi into ekukukhathazayo.
Ukuguquka kwesisu kuyinkathazo yesisu. Ngamanye amaxesha kuvela ngokwawo, kwaye mhlawumbi luphawu lokugula. Ukuba uthe wadla into evela kwimpuma yasempumalanga, ukubonakala kwayo akuyikho. Kodwa ukuba ayichitheki kwiintsuku ezintathu. Lo ngumqondiso wento ebalulekileyo. Yintoni enokuyifumana emva kokuvavanywa.
Xa ukunyanzelisa, ugqirha uhlola umsebenzi wepakreas. Kule nto, nokuba iimvavanyo zokuphefumla ziyafumaneka. Kwaye emva koko, ukuba, kuyimfuneko ukunika umthamo we-enzymes. Ngenxa yokuba ezinye iimpawu zibangelwa ukuhla kwezenzo ze-enzyme. Apha awukwazi ukwenza ngaphandle kokuhlalutya okufanelekileyo.
Ukubonakala kwe-dyspepsia kuxhomekeke kwisizathu saso. Ukuba iphezulu kwisisu, kwingingqi yesisu, uya kudla ngokukhawuleza. Kwaye kwanokutya okuncinci kuya kubangela ukrakra, ukubethelwa, ukugubha, ukukrakra, kunye nentlungu emlonyeni. Ukuba ngasezantsi, emva koko ukucima nokuxhomekeka kwindlu yangasese.
Ngamanye amaxesha iingxaki zesisu nezesisu zithinteka kuphela ngenxa yobuthathaka nokulala. Kodwa ukuba zihlala zongezwa kwindlu yangasese, kunokubakho ingxaki kwi-malabsorption. Oko kukuthi, ukusila kakuhle kwezinto. Isizathu siyi-enzymatic ye-pancreas. Ngenxa yoko, i-dysbiosis iyakwenzeka. Ngokuqhelekileyo oku kwenzekayo xa iprotheni ifakwa kwi-ration yokutya ngobuninzi. Ngesifo se-dysbacteriosis ekudleni akufanele sinyanwe, i-muffin esanda kubhaka, i-pickled, i-spicy, i-salted, i-smoked, i-canned kunye ne-soda. Kwiimeko ezinjalo kungcono ukusela ukunyuswa kwamagilebhisi - baya kunciphisa ukuvuvukala. Unokuthatha ezo zityalo njenge-chamomile, i-mint, i-linden, inja yavuka. Iziqhamo ze-marigold, i-plantain, i-cumin, i-dill, unina kunye nomama-wesibini, i-yarrow. Ukunciphisa ukusetyenziswa kweesekese.
Ingxaki ezininzi ezinezifo zesisu neesisu, ngakumbi uqaphele kufuneka ube kunye nemifuno neziqhamo.
Jonga impilo yakho kwaye uhlale uphilile.
U-Elena Klimova , ngakumbi kwisiza
Ulwaphulo lwe-oksijeni: iintlobo eziphambili kunye nemiphumo emzimbeni
Iqabunga leCowberry njengesilungiso somntu osisimangaliso
Indlela yokunciphisa ukukhathala?
I-stylish light spring head
I-cese-cottage cheese casserole
Ukuhlanjululwa komzimba ngokulamba